नङ टोक्नु हुन्छ ? थाँहा पाउनुहोस् यो बानि कतिको घातक छ – Kumbha Khabar
नङ टोक्नु हुन्छ ? थाँहा पाउनुहोस् यो बानि कतिको घातक छ
On २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०६:३५
बिबिसी– सामान्यतया सबै खाले रोगव्याधबाट जोगिन चिकित्सकदेखि घरपरिवारका ठूलाबडाले हात सफा राख्ने सल्लाह दिन्छन्। सबै भन्छन्, ‘हात सफा राख। दिसा–पिसाब गरेपछि साबुनले हात धोऊ, खाना खानुअघि हात धोऊ।’